Vaviantitra avy naka kitay : Voafira famaky, noloarana ny masony -
AccueilSosialyVaviantitra avy naka kitay : Voafira famaky, noloarana ny masony
Vaviantitra avy naka kitay : Voafira famaky, noloarana ny masony
10/10/2018 admintriatra Sosialy 0
Mbola nahantso vonjy. Vaviantitra iray manodidina ny 60 taona no niharan’ny habibiana tany Antseva Toliara, ny alahady lasa teo. Voafira famaky ary noloarana ny voamasony roa. Io no hitan’ny olona tany anaty ala, taorian’ny feo nalefaka nataony nandritry ny famonoana azy.
Habibiana tsy roa aman-tany no nihatra tamina renim-pianakaviana iray tany amin’ity fokontany voatondro ity. Olona sendra nandalo sy nahare ny antso vonjiny no nijery ny zava-niseho, ka naita azy izay efa tsy nahatsiaro tena noho ny daroka nahazo azy. Nahagaga moa ny mbola nahaveloman’ity vehivavy lehibe ity raha ireo ratra teny aminy no nojerena. Vaviantitra iray, mpivarotra kitay moa raha ny loharanom-baovao no niharan-doza, izay efa narahina olon-dratsy roalahy. Araka ny filazany, avy naka kitay ny tenany, nahita tovolahy iray izy ka nantsoiny mba hanampy azy, nanantona ilay nantsoina, saingy namoaka famaky ka namely ilay ramatoa avy ao amin’ny hatoka. Nony lavo izy dia nipoitra koa ny naman’ilay mpanao ratsy, ka avy dia naka ny voamason’ilay ramatoa tamin’ny alalan’ny famaky. Tsy vitan’izany anefa fa mbola novelesina indray avy ao amin’ny tendany, ka tsy nahatsiaro tena intsony izy. Niezaka ny hiantso vonjy izy, ka nisy nandre nefa tsy tratra intsony ireo jiolahy. Ilay niharan-doza kosa nentina ao amin’ny toeram-pitsaboana.
Efa matetipi-tranga ny habibiana tahaka ity, na eto amintsika, na any amin’ny faritra. Sahala amin’ity ihany no niseho tany anaty alan’i Sahavongo, kaomina ambanivohitra iray any amin’ny distrikan’i Toamasina faharoa. Renim-pianakaviana naka kitay ihany koa no nokapakapaina tovolahy tamin’ny antsibe. Rakotra dian’antsy ny vatany iray manontolo. Dian’antsy lalina efa ho efatra mantsy no hita teo an-tampon-dohany, ary maherin’ny iray santimetatra ny halalin’izany ratra izany. Olona nihoson-drà noho izany no nampakarina tao amin’ny hopitaliben’i Toamasina. Efa mandray an-tanana ny fanadihadiana ny eo anivon’ny polisy sy ny zandary any an-toerana mahakasika ity lehilahy ity, izay mbola tsy fantatra mazava ny fiaviny sy ny momba azy. Voalazan’ireo nanatri-maso kosa anefa, fa olona tsy avy ao amin’ny manodidina mihitsy izy. Habibiana sa halatra taova?